Izindaba - Hlanganisa amandla angaphakathi bese usetha isikebhe - UShandong Gaoqiang ubambe ngempumelelo umhlangano wokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe
Hlanganisa amandla angaphakathi bese usetha ukuhamba ngomkhumbi - UShandong Gaoqiang ubambe ngempumelelo umhlangano wokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe
Umenzeli wokunciphisa amanzi we-SNF
I-SNF (Naphthalene based) ejenti elinciphisa amanzi livame ukubizwa nge-β-Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (igama elifushane: SNF, PNS, NSF, njll.). Iyisikhungo sokunciphisa amanzi esikhulu kunazo zonke futhi esisetshenziswa kakhulu eChina njengamanje (≥ 70%). Kubonakala ngezinga eliphakeme lokunciphisa amanzi (15% - 25%), akukho ukungena emoyeni, okunamandla amancane ekubekeni isikhathi, ukuzivumelanisa nezimo okuhle ngosimende, ukusetshenziswa okuhlanganisiwe nezinye izithasiselo kanye nentengo ephansi. I-SNF isetshenziselwa kabanzi ukulungiselela uketshezi oluphakeme, amandla aphezulu nokukhonkolo okuphezulu kokusebenza. Ukulahleka kokhonkolo ngokufaka okulula kwe-SNF kuyashesha. Ngaphezu kwalokho, ukuguquguquka kwe-SNF kwamanye usimende kudinga ukuthuthukiswa.
Umphathi jikelele Wenkampani, uZhu Menshou, kanye nabasebenzi abebehambele umhlangano, bamukele ngemfudumalo uDkt Gao. UZhu uveze ukuthi ngaphansi kokuqubuka kwalolu bhubhane, kwavulwa imodeli enkulu yengqalasizinda, inkampani yavula amathuba okuthuthuka kanye, futhi amathuba ahlala ebekelwe labo abazilungiselele. Inkampani kufanele ihlole ngobuhlakani imodeli yebhizinisi, futhi ivuselele njalo imikhiqizo namamodeli wensizakalo. Kuphela ngokufunda njalo, ukusebenzisa abakufundile, njalo ukudala izinzuzo zokuncintisana, nokwakha amaqembu asebenzayo, lapho inkampani ingahlala khona ingenakunqotshwa.
Umhlangano, uDkt Gao wenze utshwala obuningi bomama obuyi-carboxylic acid kanye nokusebenza kwaso kwempahla nokusatshalaliswa kwendlela yokulawula, ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe, kuchaze i-PCE yotshwala ongumama ngezimpawu zokusatshalaliswa kwempahla nokuhlanganiswa ngezinto ezicatshangelwe, i-PCE nezinto zayo ezisebenzayo ezakhiweni zomthethonqubo kakhonkolo, ukuhlanganiswa kokufakwa kokhonkolo kuvame ukuba nolwazi olufana nezinkinga nezinyathelo zokulwa, futhi kuhlanganiswe necala langempela lobunjiniyela lobuchwepheshe obuhlobene nalo kuqhubekile nencazelo enemininingwane. Ekugcineni, engxenyeni exhumanayo yesiza, uDkt Gao uphendule imibuzo ephakanyiswe ngabasebenzi boMnyango Wezokumaketha kanye noMnyango Wezobuchwepheshe ngamunye ngamunye, enikeza imibono esebenzayo ngezinkinga ezibalulekile nezinzima abahlangabezana nazo nabasebenzi bezokumaketha nabezobuchwepheshe. esizeni sephrojekthi.
Ngalolu qeqesho, abasebenzi bathe bazuze lukhulu: abasebenzi bezobuchwepheshe benkampani nabathengisi baye baqhubeka nokuqonda izici zotshwala bomama be-polycarboxylate nezinto zayo zokusebenza kanye nolwazi lwethiyori nokusebenza kwamakhono okuhlanganisa ubuchwepheshe bokulawula, futhi banikeze futhi ukusekelwa kwemfundiso yenkampani ekusetshenzisweni kobuchwepheshe bezithasiselo nesevisi yokuthengisa ngemuva kokuthengisa.
"Funa ukuthambekela okujwayelekile, wakhe isisekelo esiqinile uzuze ikusasa". Isisekelo esihle siletha izinqubomgomo ezithandekayo zamabhizinisi, kepha inkampani ingahlala ingenakunqotshwa kuphela uma isebenzisa amakhono wangaphakathi weqembu, iqhubeka ngokucija imikhiqizo, ithuthukisa izinga lenkonzo, futhi ihlangabezana nezidingo zamakhasimende. Akukho ukuphela kokufunda nokuzabalaza, kepha yenza izinto ezinhle, ungabuzi ikusasa, ikusasa lenkampani ye-gao Qiang lingalindelwa!